CASIIRKA DABOCASE: GURYAHA DABIICIGA AH, MAXAY YIHIIN FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA JIRKA, SIDA LOO GURTO GURIGA, SIDA LOO KARSADO SIDA RAASHINKA LAGA HELO DABOCASE CAYRIIN IYO XAQ DARO? - BEER CAGAARAN
Cabitaankani waa keydka fitamiinada! Sida loo sameeyo iyo qaado cabitaanka dabocase ah?
Casiirka cusub ee Beetroot ayaa ah cabitaan caan ah oo aan caadi aheyn oo keliya Ruushka, laakiin sidoo kale dadka deggan wadamada kale.
Sababtoo ah noocyo badan oo kala duwan ee xididkan, waxaad si fudud u dooran kartaa xulashada ugu fiican, ugu richest ee fitamiinada iyo macdanta.
Isticmaalka cabitaankani wuxuu saameyn ku yeeshay shaqada hawshiisa oo dhan, wuxuu ka caawiyaa sidii uu ula qabsan lahaa cudurrada xubnaha iyo nidaamyada kala duwan.
Sidee sida caadiga ah ee casiir laga soo qaato buryak ayaa lagu dabaqayaa, faa'idoyinkeeda waxa ay keenaysaa aaladda, iyo waliba dhammaan muuqaalada ay isticmaalaan waxaan tixgelin doonaa maqaalka.
Khudaarta dabiiciga ah waxay ka mid tahay kaydka dhabta ah ee fiitamiinada, macdanta iyo tiro ka mid ah walxaha kale ee waxtarka leh.
Waxaa ka kooban casiir dabocase:
nicotinic acid ama niacin;
Qadar macdan ah oo macdan ah: Kalsiyum, potassium, manganese, magnesium, fosfooraska, birta, sodium, chlorine iyo iodine.
Waxyaabaha xasaasiga ah ee cabitaankani ma aha mid sarreeya - keliya 42 kcal 100 ml. Caddadka isku midka ah wuxuu ka kooban yahay 1 garaam oo borotiin ah, 9.9 garaam oo karbohidraat ah - iyo dufan lahayn. Laakiin waxaa jira biyo badan - ku dhowaad 84 garaam.
Faa'iido kale oo ka mid ah casiirka dabocase, marka la barbar dhigo isticmaalka caadiga ah ee xididka, waa content hooseeya ee fiilooyinka aan dhab ahayn. Sidaa daraadeed, in cabitaanka la cabbo waa mid aad u fiican oo sahlan, halkii uu lahaa tiro la mid ah xididdo caws ah.
Faa'iidooyinka iyo dhaawaca jidhka bini'aadamka
Ka fikir faa'iidooyinka iyo waxyeellada casaanka casaanka cas. Saameynta cabitaanka bogga jirka waa mid aan qaali ahayn. Maaddaama ay ka kooban tahay hodantin tayo iyo hantidooda faa'iido leh Cabitaanka Beetroot waxaa loo isticmaalaa labadaba dadka iyo daawada dhaqameed..
Sidee waxtar u leh:
Waxay sii wadaysaa heerka ugu wanaagsan ee hemoglobin ee dhiigga sababtoo ah maadada birta (sida dabocjirku u saameeyo dhiigga aadanaha, halkan ka akhriso).
Waxay si fiican ugu wanaagsan tahay barar iyo caloosha oo ay sabab u tahay saameyn la yiraahdo maqaarka iyo dareeraha (waxaad ka ogaan kartaa wax badan oo ku saabsan ka hortagga iyo daaweynta caloosha ee dadka qaangaarka ah iyo carruurta oo leh caawimaadyada jaalaha ah ee maqaalkani).
Waxay hagaajineysaa isku dhafka iyo xaaladda maqaarka guud ahaan.
Si wanaagsan u saameeya xididdada dhiigga, taas oo hoos u dhigeysa cadaadiska.
Waxay ka caawisaa in la nadiifiyo beerka, kelyaha iyo weelasha dhiigga (sida loo nadiifiyo jidhka leh xididdo, waxaad halkan ka heli kartaa).
Waxay xakameysaa "xun" kolestarool (si faahfaahsan oo ku saabsan in la cuno ama la cuno rooti cagaarsho leh iyo caga-beebka iyo qaabka, halkan ka akhriso).
Waxay hagaajisaa xaaladda jidhka oo dhan, waxay kordhisaa dulqaadkeeda.
Marka loo eego galka glisememic hoose waxaa loo isticmaali karaa miisaan lumis.
Waxay kordhisaa qiyaasta oksijiinta ee wadnaha iyo murqaha u maraya ballaarinta xididdada dhiigga. Saameyntu waxay sabab u tahay heerka sare ee betinka.
Waxay xoojisaa nidaamka difaaca jirka.
Si ka duwan sida khudradda cagaaran, casiirku wuxuu leeyahay saameyn kale oo jilicsan.
Intaa waxaa dheer, Fiican oo loo yaqaanno daawooyinka ee casiir dabocase cusub sanka: wuxuu daweeyaa cudurro kala duwan oo ka mid ah bukaan-socodka.
Marka si haboon loo isticmaalo gudaha casiirka asalka, dhaawaca jidhku ma shaqeyn doono.
Si kastaba ha noqotee, marka la doorto qiyaasta ugu fiican, dhibaatooyinka badanaa waa ay soo baxaan, sidaas darteed aan ku noolaano natiijooyinka aan macquul ahayn.
Waxyeelo ka yimaadda isticmaalka casiir dabocase cusub:
Calaamadaha fal-celin xasaasiyadeed oo ka yimaada jiritaanka jidh-dillaacsanaanta jidhka. Marar badan maahan, laakiin tani waa suurta gal. Sidaa daraadeed, waxaa lagula talinayaa in aad bilawdo juuska qiyaasta 30-50ml mar. Tani waxay ka fogaanaysaa cawaaqib xumada suurtagalka ah
Cabitaanka xaddi badan oo casiir ah waxay keeni kartaa lallabo, calool xanuun, shuban, iyo xitaa madax xanuun.
Sida laga arki karo liiska - dhibaatada ka soo xididdo, haddii ay jiraan, waa mid aad u yar. Waa inaad si macquul ah u wajahdaa mugga la wada baabbi'iyo oo samee tijaabo horudhac ah si loo ogaado dareen-celinta xasaasiyadda suurtagalka ah.
Inkastoo xaqiiqda ah in xididdo aysan ka mid ahayn dhirta daawada, ugu yaraan daawooyinka looma sameynin saldhigeeda, saameynta daaweynta ee casiir ka ah dalagga xididgan ayaa aad u sarreeya.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee isticmaalka waa:
Faa'iidada dhiigga ee kor u kacay
Dheecaan qabow, difaac yareyn. Waxaa suurtagal ah in la isticmaalo qandho iyo xanuun cuncun ah oo ah noocyada sanka sanka ah iyo sida loo dhaqo (baro sida loo daaweeyo angina leh xididdo, iyo sidoo kale arag cuntooyinka bogsashada boggan).
Vitamin C Vitamin C la'aan
Atherosclerosis - daaweyn adag iyo kahortag.
Dhibaatada xasuusta iyo dareenka.
Chemotherapy (dheeraad ah oo ku saabsan sida caleemaha ka caawiso cudurka kansarku waxaa laga heli karaa halkan).
Waxa jira waxyaabo ka hortag ah casiir.:
Boogta Peptic iyo 12 pers.
Waa in la ogaadaa in uurku aanu ahayn wax khatar ah isticmaalka juice this.
Sidee loo sameeyaa cabitaanka dabocase cusub?
Mid ka mid ah faa'iidooyinka of casiir beetroot waa shaki la'aan la heli karo.. Khudaarta cagaaran waxaa laga iibsan karaa dukaanka oo dhan sanadka oo dhan qiimo jaban. Sidaa darteed, ma aha lagama maarmaan in la gooyaa casiir ku jira.
Fresh, waxay noqon doontaa dhir, iyo inta lagu jiro pasteurization tiro badan oo fiitamiin iyo macdanta ayaa lumin doonaa.
Waxyaabaha muhiimka ah ee wax soo saaridda:
Wixii diyaarinta cabitaanka waa inaysan isticmaalin khudradda asaasiga ah leh xariijimo fudud. Midhaha ku habboon miro casuuban oo ku habboon, inta badana muuqaal ah.
Waa in aad marka hore ka saarto saddexaad sare ee xididdo leh dushooda.
Casiirka waxaa laga sameeyey kaliya xididdo ceedhiin ah. Waxyaabaha la kariyey ee ujeeddadani waa wax aan faa'iido lahayn.
Cabbitaanka waa in loo oggolaadaa inuu istaago qaboojiyaha ugu yaraan saacad ka hor isticmaalka. Tani waxay ka fogaaneysaa xaalad-xumada caafimaad iyo dawakhaad.
Nolosha khadka-qaboojiyaha - laba maalmood.
Sidee loo sameeyaa casiir?
Casiirka waxaa la samayn karaa ama aan lahaan karin. Aan eegno sida loo tuujin karo casiir aan laheyn guriga. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay oo keliya huurka iyo bir ah faashad.
Grater wuxuu u fiican yahay inuu isticmaalo caag. Mashiinka birta ayaa kaa caawin doona oxidise casiir..
Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo dhinac leh godadka ugu yar, sidaa darteed xayawaanka dufanka leh waxay u eg yihiin gruel. Waxay u baahan doontaa in lagu duubo faashad iyo si fiican u tuujin.
Halkii laga jarjarin lahaa, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa blender ama processor processor. Farsamadani waxay si buuxda ula qabsan doontaa qaboojinta, iyo badeecada soo baxday waxay u baahan tahay oo kaliya in la tirtiro isticmaalka faashad.
Imisa khudaar cagaaran ah ayaan qaataa si aan u helo 100 ml oo casiir ah? Wixii soo saarida 100 ml oo casiir ah waxay u baahan doontaa qiyaastii 2-4 dalagyo xidid dhexdhexaad ah.
Cunto kariska iyo talooyinka ku saabsan sida loo cabo badeeco cusub.
Ka dib markaan tixgelinnay faa'iidooyinka casaanka casiirka cusub ee jidhka, waxaanu sii falanqeyn doonnaa, iyo waliba la socoshada alaabada kale ee aad cabi karto.
Wixii iskeelka ah, waxaad u baahan doontaa inaad qaso casiir beetroot malab leh 1: 1 saamiga. Talooyin ku saabsan inta jeer ee miiska casaanka ah ee aad u baahan tahay inaad cabto waa shakhsi.. Waxaa badanaa lagu taliyaa in la soo saaro badeecada la soo saaro qiyaas ahaan 1-2 qaado oo ah 3 ilaa 5 jeer maalintii kahor cuntada.
Nidaamkani wuxuu caddaynaya dhiig kar iyo hurdo la'aan. Marinnada nadiifka ah si fiican. Koorsada daaweynta waa laba toddobaad.
Casiirka leh malab for hurdo, waxaad horey u diirin kartaa ilaa 40 digrii.
Iyada oo tufaaxa
Waxaa loo adeegsadaa atherosclerosis, heerkulka hemoglobin ee hooseeya, neurosis, cadaadiska dhiigga oo sarreeya, jilicsanaanta xididada iyo ku xadgudubka dabeecadooda. Iyada oo dhiig-karka, waa inaad cabtaa 100 ml subax kasta.. Xaaladaha kale, casiirku waa in loo qaybiyaa laba tallaabo. Laguma talinayo in aad cabto cabitaan ka dib shan fiidnimo. Koorsada daaweyntu waa saddex toddobaad.
Tufaaxu waa inuu isticmaalo noocyo jilicsan, noocyo macaan. Beeraha waa in si fiican loo nadiifiyaa oo la raaciyaa biyo socda.
Juice waxaa la sameeyey iyada oo ku saleysan 3 tufaax 1 dabocase. Waxaa muhiim ah in la waafajiyo tiknoolajiyadda wax soo saarka. Si aad u bilowdo, tuujin casiir ka soo dabka iyo ku rid qaboojiyaha 1-2 saacadood.
Ka dibna casiir tufaax cusub ah ayaa lagu daraa.
Waa in lagu qaadaa kabuubyo yaryar, oo aan ka badnayn 50 ml mar.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo jirka sunta iyo sunta, loo isticmaalo miisaan lumis. Waxaad u baahan doontaa 1 dabocase iyo 2 qajaar oo dhexdhexaad ah si loo kariyo..
Si aad this casiir ka soo dabocase waxaa lagu daray qajaar cusub oo isku dhafan.
Si lumiso miisaanka waa in la qaataa 20 daqiiqo cuntada ka hor. Koorsada ugu fiican waa bil.
Cuntadan waxaa kale oo lagu kala duwanaan karaa iyadoo lagu darayo celery iyo liin.
Qalabka wuxuu leeyahay saameyn sumcad ah.. Waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga, waxay ka caawisaa sidii ay ula qabsan lahayd walaaca, xannibaadyada unugyada kansarka waxayna kor u qaadaan miisaanka.
Wixii soo-saarka wuxuu u baahan doonaa inuu qaato 1 xididdo yaryar, 1-2 cagarug ee celery iyo 2 karootada.
Ugu horreyntii, casiirka ayaa laga tirtiraa xididada iyo in lagu buufiyo qaboojiyaha.
Taas ka dib, karootada cusub oo casiir ah iyo cabitaanka celceliska ayaa lagu daraa (waa maxay isticmaalka iyo waxyeelada dabocase iyo cabitaanka dabacasaha iyo sida loo qaato cabitaan, halkan ka akhriso).
Waxaad cabbi kartaa 100 ml, inta badan subaxdii. Kooraska soo dhaweynta waa laba asbuuc.
Sidaa daraadeed, waxaan tixgelinnay faa'iidooyinka iyo waxyeelada aaladda ceyriinka ah, waxa ay caawiso, iyo sida loo qaato. Casiirka cusub ee Beetroot waa caawiye weyn oo loogu talagalay dagaalka wanaagsan iyo muuqaal cusub oo soo jiidasho leh. Qaado koorso, ha iloobin inaad raacdo talooyinka sameynta, natiijo weyn ma qaadan doonto muddo dheer si aad u sugto.
Garden on windowsill ama balakoonka: dhan oo ku saabsan sida loo koro yaanyada cherry at guriga
Ciidda Ukraine waxay bilaabaan inay lumiyaan bacriminta